Aung Htet | MoeMaKa Burmese News & Media
လောအယ်စိုး - ရေဆန်ကို ကူးခတ်သည့် အဖေ့သမီး (သို့မဟုတ်) ဒေါ်အေးအေးဝင်း
ကာတွန်း ဆွေသား - ထောက်ပြလို့ ရတယ်နော်
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ပုဂံမြေကို ကယ်တင်ပါ
အေးငြိမ်း - ကျွန်ုပ် အလွန်ခေတ်နောက်ကျနေသေးသည် ဆိုခြင်းအကြောင်း
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မမီးမီးဈာပန အခမ်းအနား သြဂုတ် ၁၇ရက် ရေဝေးသုသာန်
မမီးမီး (၄၇) နှစ် - ၀မ်းနည်းခြင်း မှတ်တမ်း
မွန်းအောင်နှင့် နှစ် ၃၀ မြောက် ၈၈၈၈ အခမ်းအနား ကနေဒါတွင် ကျင်းပ
ဇင်လင်း - ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ၏ ရည်မှန်းချက်ကို မျက်ခြည်မပြတ်ဖို့လိုသည်
ညိုထက်ညို - လွမ်းတနွမ်းလျ
>Choe Lin Pyar is now on the internet - flying
စိုးနေလင်း ● စိတ်ကုကဗျာ
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - ကဗျာဆရာမောင်ချောနွယ် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၂ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ
>ရေဆန် - ကဵနော့်ဘ၀ သူရဲကောင်း
သမတကြီး သိစေလို (မိုးမခပေးစာ)
နီလွင်သွေး(ဒဿနိက) - သံမဏိသူရဲကောင်းသို့ဦးညွှတ်ခြင်း
ကျော်လင်းထွန်း - ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ ဥပဒေများနဲ့ မြန်မာပြည်
ရိုးတံ (ပုလဲနယ်) ● ကုန်လွန်နာရီများ
မောင်အဉ္စန - မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး
>SPDC says no information on tracked NKorean ship
စက်တင်ဘာလထုတ် မိုးမခ (လလည်) မဂ္ဂဇင်း ထွက်ပြီ
ကာတွန်း ဘီရုမာ - သူတို့စားသလောက် စားရရင်
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month August 2018 (125) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
About MoeMaKa (92)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (81)
Law Eh Soe (31)
K ငြိမ်းချမ်း (87)
ကာတွန်း ATH (219)
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း (62)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (77)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (224)
Cartoon Box (3,569)
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ပုဂံမြေကို ကယ်တင်ပါ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဈေးရုံကြီး (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ရင်ကြားစေ့ပါရစေဗျာ … (0)
ဆွေဝင်း (Myanmar Now) ● တစ်နှစ်မှာ အကျဉ်းသား ၃ဝဝ လောက် သေခဲ့တယ် (အင်တာဗျူး) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၈ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရဲဘက်စခန်းများတွင် အကျဉ်းသားတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အခြေအနေဆိုးများအကြောင်းကို အငြိမ်းစား ထောင်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပြထားသည်။ ၁၉၉၁ တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်းရှိ ဘဝသစ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုစခန်း ခေါ် ရဲဘက်စိုက်ပျိုးရေးစခန်းများသည် အကျဉ်းထောင်လောကတွင် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ကလေးမြို့နှင့် တမူးမြို့ရှိ တောတောင်များတွင် ထိုစခန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှစ၍ အစာရေစာ ပြတ်လပ်မှု၊ ရာသီဥတုပြင်းထန်မှု၊ ဆေးဝါးကုသခွင့်မရမှု တို့အပြင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်များကြောင့် အကျဉ်းသား ရာနှင့်ချီ နှစ်စဉ် သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုစခန်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်ပြီး၊ စခန်းအချို့တွင် ကိုယ်တိုင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးမှာ...
Nsikan Akpan (PBS) ● အရေပြားအတွက် ဆင်ကိုသတ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာ့ဆင်များ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်
Nsikan Akpan (PBS) ● အရေပြားအတွက် ဆင်ကိုသတ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာ့ဆင်များ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၈ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တရားမဝင်သတ်ဖြတ်ထားသော တောရိုင်းအာရှဆင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂေဟဗေဒပညာရှင်များ သည် ချုံနွယ်များ၊ ဝါးပင်များထူထပ်သော တောကြီးမျက်မည်းထဲတွင် နာရီပေါင်းများစွာ တောနင်းရှာသော်လည်း အာရှဆင် တစ်ကောင်တစ်မြီးမျှ မတွေ့ပါပေ။ ယခုဆိုလျှင် ဂေဟဗေဒပညာရှင်များ သည် တရားမဝင်ဆင်ခိုးဖမ်းသူများနှင့် အပြိုင် အာရှဆင်များကို ရှာတွေ့ရန် ကြိုးပမ်းနေရပြီ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည် သုံးနှစ်၊ လေးနှစ်က စ၍ ဆင်ခိုးဖမ်းသူများသည် ပတ္တမြားတုများပြုလုပ်ရန် ဆင်များ၏ အရေပြားများကို ခိုးယူလာကြသည်။ Smithsonian Conservation Biology Institute နှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို စောင့်ကြည့်သည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်သော...
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်းရဲ့ အမေရိကန်ကို မီကုန်ပြီ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၃၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● ကျောက်ဖြူမြို့ ငလပွေ့ရွာအနီး တာကျိုးပေါက် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၃၊ ၂၀၁၈ (ရန်ကုန်) — ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိ ငလပွေ့ကျေးရွာအနီးတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်း ဒီရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့် တာတမံ ပေ ၃ဝ ခန့် ကျိုးပေါက်သွားပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ငါးကန်များ၊ ကန့်စောင့်တဲများ ရေမြှုပ်နေကြောင်း မြို့နယ် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။ ပျက်စီးသွားသော တာတမံ (ဒေသအခေါ် ကာရီ) ကို အရေးပေါ် ပြုပြင်ရန် တခြား ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဆည်းမြောင်းဦးစီးမှူး ဦးသက်လင်းထွန်းက ပြောသည်။ “အခုဆို ပေသုံးဆယ်လောက်ရှိသွားပြီ။ ဒီရေနောက်တစ်ကြိမ်မတက်ခင် အမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် တာကျိုးတာတော့ လတ်တလော မသိသေးပါဘူး” ဟု...
မင်းကိုနိုင် ● ပန်းတိုင်ရှိရင် ခရီးတော့ ရှိလိမ့်မယ် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၃၊ ၂၀၁၈ ကိုမင်းကိုနိုင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှ ပြန်လည်ကူးယူသည်။ ‘‘ဟေ့…မခြိမ်းနဲ့၊ မခြောက်နဲ့ ရွာချလိုက်၊ ထစ်ချုန်းလိုက် ငါတို့ စိုဖို့အသင့်ရှိ’’ × × × ‘‘ဘာတွေ ခြိမ်းခြောက်သွား လို့လဲ။ ဒီလောက်ဒေါမာန်ကြီးနေ တာ’’ တစ်ရပ်ကွက်လုံး သိချင် သောစကားကို ကိုယ်စားတစ် ယောက်ကမေးသည်။ ဓမ္မာရုံလူ ကြီးမှာ သူ့ခေါင်းဆံဖြူငုတ်စိကို နာနာဖိပွတ်လျက်ဖြေ၏။ ‘‘ဘယ်သူလာကပ်သွားလဲ၊ ဘယ်အချိန်ကလဲ၊ ဘာလို့လာ သတင်းမပို့တာလဲ ဒါတွေပဲပေါ့။ တောက်လျှောက်မေးတာ အရင်။ ပြီးမှ ခြိမ်းခြောက်တာ’’ ဓမ္မာရုံတစ်ဝိုက် စူးစမ်းသူ တွေ ထန်းလျက်နံ့ရသည့် ပုရွက် များပမာ အုံခဲလာသည်။ တစ် ယောက်က ဖြတ်မေးပြန်သည်။...
မောင်မောင်စိုး ● မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနှင့် ရေစီးကြောင်း ၂ ခု (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၃၊ ၂၀၁၈ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးပြဿနာသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာသက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားတန်းတူ ရေး ပြဿနာလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုပြဿနာရပ်များသည် ပေါက်ဖွားသည့်ဇစ်မြစ်တူသော်လည်း ကိုယ်စားပြုသူများမတူကြ။ ရည်မှန်းချက်များမတူကြ။ ကိုယ်စားပြုမှုများ မတူကြ။ ဖြတ်သန်းမှုများ မတူကြသည့် ရေစီး ၂ ခုသဖွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုရေစီး ကြောင်း ၂ ပေါင်းဆုံပါက အရှိန်အဟုန်ကြီးမားသည့် ရေစီးကြောင်းကြီးတခုဖြစ်လာ ဖွယ်ရှိသော်လည်း ကံအကြောင်းမလှ စွာပင် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင် ထိုရေစီးကြောင်း ၂ ခုသည် ပေါင်းဆုံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ မျဉ်းပြိုင်သဖွယ်ဖြစ်နေ သည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ● ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး မြန်မာပြည် ပြည်မလူထုအများစု၏ အဓိက နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့်...
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ သူထော ကိုယ်ထော မြန်မာအိုင်ထော (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး Related posts ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ပြေးမလွတ်တွေ … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ တက်ကုန်ပြီ …. (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ဆင်ခြေများတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စီမံကိန်းတွေ … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် သွားလည်ပါကွယ် … (0)
ညိုထက်ညို ● ၁ နာရီ ၃၈
ညိုထက်ညို ● ၁ နာရီ ၃၈ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၀၁၈ Auckland လေဆိပ်တွင် wheel chair service ရယူသည့် သက်ကြီးအရွယ် ခရီးသည်များ နားနေရန် စီစဉ်ထားသည့် ခုံတန်းလျား ကလေးတွင် ထိုင်ရင်း ကျန်နေခဲ့သည့် အဖေ့ ကို ရက်ငါးဆယ် လောက်အကြာတွင် ရေဝေးသုဿာန် အအေးခန်း ဝင်ဝင်ချင်းတွင်ရှိသည့် သင်္ဂြိုဟ်တော့မည့် အလောင်းများကို ပြင်ဆင်ရန် ခေတ္တထားသည့် အခန်းကလေးတွင် အလောင်း စင်ပေါ် လဲလျောင်းလျက် အနေအထားဖြင့် ကျွန်တော် ပြန်တွေ့ရပါသည်။ အဖေ့အလောင်း ဘေးပတ်လည်တွင် ရေများ ရွှဲအိုင်လျက် အဖေ့ လက်ဖျားခြေဖျား ကလေးများတွင် ရေခဲမှုန်ကလေး များက ကပ်နေကြပါသည်။ အဖေ့အလောင်း ကို ပြင်ဆင်ပေးနေသည့်...
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ရဲ့ ပါတော်မူကုန်ကြပြီ …
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ရဲ့ ပါတော်မူကုန်ကြပြီ … (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) Related posts ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ရဲ့ ပြောင်းဖူးလေ … ပြောင်းဖူး .. (0) ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ● ပြည်သူ့ပိုက်ဆံ ပေါ်တင် ခိုးတဲ့ကောင်တွေ (0) ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ● ဟိုမှာ လာနေပြီ .. လာနေပြီ …. (0) ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ● စဉ်းစားနေတုန်းဗျ …. (0)
ခိုင်ကြည်သစ် ● တရုတ်၊ မြန်မာနှင့် အနောက်ကမ္ဘာ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၀၁၈ (၁) ကနေဒါလူ့အခွင့်အရေး ပြတိုက် (Canadian Museum for Human Rights – CMHR) အနေဖြင့် ဒေါ်ေ အာင်ဆန်းစုကြည်အား ရည်ညွှန်းထားသော ဂုဏ်ပုဒ်များကိုဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်း CBC သတင်းဌာန (ကနေဒါ ရုပ်သံကော်ပိုရေးရှင်း) က ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဘင်္ဂါလီများ (မူရင်း ရိုဟင်ဂျာ) အပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြတိုက်၏ ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် စီမံချက်များဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ အန်ဂျလာကတ်ဆီ (Angela Cassie) က ဆိုသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား...
စည်သူဇေယျ ● ရေပယ်ရွာ အရင်လို ပြန်ရပါ့မလား
စည်သူဇေယျ ● ရေပယ်ရွာ အရင်လို ပြန်ရပါ့မလား (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၀၁၈ ပြုန်းတီးသွားသော တောကောင်းများကို အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောပြုလုပ်၍ ပြန်လည်ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း ရေပယ်ရွာကလေးသည် လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်က အုံးဆိုင်းနေသည့် တောကြီးများနှင့် ဖုံးလွမ်းထားသည့် တောင် တန်းများကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေကြသည်။ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော အဖြစ် ပြန်လည်ပြုစုပြိုးထောင်နေရသော ထိုတောင်တန်းကြီးများသည် တောင်ကတုံးအဆင့်မှ ပြန်လည်စတင်ရမည့်အနေ အထားဖြစ်သည်။ ရေပယ်ရွာမှ လှမ်းကြည့်လျှင် သစ်ပင်များ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ပေါက်ရောက်နေသည့် တောင်တန်းကြီးကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင် ရသည်။ လူတစ်ရပ်စာအမြင့်သာရှိသော နောက်ဆုံးလက်ကျန် သစ်ပင်များကို တောင်ခြေမှ လှမ်း၍ရေတွက်နိုင်သည်။ ထို တောင်တန်းကြီး၏ အောက်ခြေတွင်ရှိသော ရေပယ်ရွာတွင် အဖိုးဦးစိုးမြင့်သည် အသက်၂၀ အရွယ်မှ စတင်အခြေချခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က တောင်တန်းကြီးကို...
ဆောင်းယွန်းလ ● အချိန်က စကားပြောလာမယ်ဆိုလို့
ဆောင်းယွန်းလ ● အချိန်က စကားပြောလာမယ်ဆိုလို့ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၀၁၈ စောင့်ခဲ့တယ် အချိန်က စကားပြောလာမယ်ဆိုလို့ ရေဒီယိုထဲက သတင်းကြေညာသံများ အရိုးကြေကြေ အရည်ခမ်းခမ်း အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားတွေနဲ့ ပရိတ်တရားတွေပေါ်က ခုန်ပေါက်ထွက်ကျလာခဲ့သံများ လေသံတကြားကို တရားဖမ်းနာလာခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာမှာ အချစ်ရေ မြစ်တွေလည်း စီးချင်ရာကို စီးဆင်းသွားခဲ့ပေါ့ နှစ်တွေကို မီးကူးဖို့ အားထုတ်ခဲ့ရင်း မလင်းလက်နိုင်ခဲ့တဲ့ နှလုံးသားများနဲ့ အမုန်းတရားဟာ လုံးပါးပါးခဲ့ဖူးသော မီးလောင်ပြင်တွေပေါ်မှာ အဆုံးနဲ့ အရှုံး နှစ်မျိုးစလုံးကိုလည်း ရခဲ့ဖူးပါရဲ့ အစမရှိခဲ့သေးသော လမ်းတွေပေါ်မှာ နာရီသံခြောက်ချက်ကိုလည်း ကမ္ဘာပျက်မတတ် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားခဲ့ဖူးပါရဲ့ တည့်မတ်ဖို့အတွက် ဘုရားကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံကိုနာခံမိတဲ့ ဒေသနာတွေပေါ်မှာ သေရာပါသည်အထိ ယူမသွားချင်မိခဲ့သော နောင်တတရားကို ဟောဒီ တံခါးဝမှာ ထားရစ်ခဲ့လေတယ် စောင့်ခဲ့တယ်...
မောင်အဉ္စန ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၅)
မောင်အဉ္စန ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၅) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၁၊ ၂၀၁၈ ● ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအဖြေ တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) အခြေခံ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – (၂၁)ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက်မှ (၁၆)ရက်နေ့ထိ (၆)ရက်တိုင် နေပြည်တော်(ကြပ်ပြေး)ရှိ MICC-2 မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတကြိမ်(၂၁)ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေးကြီးကို ၂၀၁၇ ခု၊ နိုဝင်ဘာလမှာ (၆)လ တကြိမ်ကျင်းပရမယ့်ဟာကို ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လရောက်မှ တနှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် တနှစ်ကျော်အချိန်ယူခဲ့ရတာလဲ…။ အဓိကအားဖြင့် (၂၁)ရာစုပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအဝေးမှာ ထစ်ဆို့နေတဲ့ Package Deal သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်...
ကာတွန်းဇေယျာရဲ့ ဖလား မလွတ်တဲ့ နိုင်ငံ …
ကာတွန်းဇေယျာရဲ့ ဖလား မလွတ်တဲ့ နိုင်ငံ … (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းဇေယျာ Related posts No related posts.
ထင်ကျော် (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ● ချစ်တပည့်များသို့ ညနေခင်း – သြဝါဒများ (၃)
ထင်ကျော် (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ● ချစ်တပည့်များသို့ ညနေခင်း – သြဝါဒများ (၃) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၁၊ ၂၀၁၈ ● အကျင့်နှင့် စရိုက် … မ, တစ်ရာသားတွေဆိုတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေထဲမှာ စရိုက်ကောင်းသည့်သူတွေ ရှိသလို စရိုက်ဆိုးသည့် မီးသွေးခဲလို ကလေးမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်သည်။ မီးသွေးခဲဆိုတာက သွေးချင်သလောက်သွေး ပြောင်လက်လာမှာတော့ မဟုတ်၊ သွေးသည့်သူသာ မည်းညစ်သွားလိမ့်မည်။ မီးသွေးခဲလည်း တဖြည်းဖြည်း လုံးပါးပါးသွားပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း မသက်သာ။ ဒါပေမဲ့ မိမိက ဆရာဆိုတော့ ကိုယ် မည်းချင်မှသာမည်းရော ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် သွေးပေးဖို့ တာဝန်ရှိသည်။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး တဖြည်းဖြည်းခြင်း နားဝင်အောင်လုပ်ရမည်။ လူပြင်ရတာက စက်ပြင်ရတာထက် ပိုခက်သည်၊ စိတ်ရှည်ရှည် ထားနိုင်ပါမှ။ “အချိန်မလေးစားတာ၊...
ကိုသန်းလွင် ● လာအိုရေကာတာကျိုးပေါက်ခြင်း
ကိုသန်းလွင် ● လာအိုရေကာတာကျိုးပေါက်ခြင်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၀၊ ၂၀၁၈ (၁) လာအိုနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်ဆဲ ရေကာတာကြီး မကျိုးပေါက်ခင်ကဤရေကာတာကြီးကျိုးပေါက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အင်ဂျင်နီယာများက သိကြပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာတဦးကဆိုလျင် မဖြစ်မီ သုံရက်ကြို၍ ရေကာတာ ကျိုးပေါက်တော့မည်ဖြစ် ကြောင်းကြိုတင်သိခဲ့ပါသည်။ ရေကာတာထိပ်တွင် မြေနိမ့်ဆင်းနေသည်မှာ ၄ လက္မခန့် ရှိကြောင်းသိခဲ့ပါသည်။ သို့ပါသော် လည်း ရေအောက်တွင်နေကြသော ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ မသိခဲ့ကြပါ။ တကယ်က ဒလဟောကျဆင်းလာသော ရေတွေက ကျေးရွာများ၊ စိုက်ပျိုးခင်းများ၊ လူအများ၊ လူတို့ကျွေးမွေးထားသော တိရိစ္ဆာန်များကို သိမ်းကျုံး ယူဆောင်သွားပါ တော့သည်။ (၂) ကုမ္ပဏီများက ရေကာတာကြီး ကျိုးပေါက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းလာအိုအာဏာ ပိုင်များထံသတင်းပို့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အချို့သောကျေးရွာများမှာ လူများရွှေ့ပြောင်းနေပြီဖြစ်ပါပြီ၊ ယခုအချိန် အထိလူ ၂၇ ဦးသေဆုံးပြီး လူများစွာမှာ...
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● ဦးကိုနီအမှုမှ ဖမ်းခံရသူတစ်ဦး တရားလိုရှေ့ နေကို တရားစွဲမည်
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● ဦးကိုနီအမှုမှ ဖမ်းခံရသူတစ်ဦး တရားလိုရှေ့ နေကို တရားစွဲမည် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၉၊ ၂၀၁၈ (ရန်ကုန်) — ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုတွင် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် ဇေယျာဖြိုးက တရားလိုရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကို တရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှု အပါအဝင် ပုဒ်မ ၃ ခုဖြင့် တရားစွဲရန် စီစဉ်နေကြောင်း သူ၏ရှေ့ နေက ပြောသည်။ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုသို့ စွဲဆိုရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးဇေယျာဖြိုး၏ ရှေ့နေ ဒေါ်ပပဝင်းက ဆိုသည်။ “ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကဦးကိုနီကို သတ်တဲ့ ဇေယျာဖြိုးဆိုပြီး တရားရုံးက စီရင်ချက် မချသေးတာကို သူက ပြောတာကြောင့်ပါ” ဟု ဒေါ်ပပဝင်းက ရှင်းပြသည်။ တရားလိုရှေ့ နေကို တရားပြန်စွဲမည့် ဇေယျာဖြိုး...
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ ၈၈ နှောင်းပိုင်း …
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ ၈၈ နှောင်းပိုင်း … (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း လိုင်းလုဏ် Related posts ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေ (0)
ထက်လူအောင် ● သြဂုတ်ဟာ မိုးတွေလိုရွာတယ်
ထက်လူအောင် ● သြဂုတ်ဟာ မိုးတွေလိုရွာတယ် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၈၊ ၂၀၁၈ ရေဒီယို အစုတ်ကြီးထဲက သြဂုတ်ရဲ့ မနက်ခင်းအဟောင်းတွေကို ဆွဲထုတ်ကြည့်မိတယ် လေလှိုင်းသံတွေထဲ ကြွေးကြော်သံတွေ သွေးတွေ မျက်ရည်တွေ ကူးခတ်နေဆဲပါလား တပြည်လုံးရဲ့ စီးပွားရေးကို တံခါးပိတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးကို တံခါးဖွင့်ခဲ့သူတွေ ရွှေဝါဆပ်ပြာနံ့ပဲ နှာခေါင်းထဲစွဲအောင်လုပ်ခဲ့သူတွေ သူတို့ကို သြဂုတ်ဟာ ရေစိုပေါင်မုန့်လို ပျော့ပြဲသွားစေတယ် လက်ဖက်ရည်တခွက် ရော့ခ်သီချင်းတပုဒ်နဲ့ ခေါင်းရွတ်ဗျပ်ထိုး ရောင်းခဲ့ရတဲ့လူငယ်ဘဝတွေ အိမ်ပြန်မလာတဲ့ ခြေထောက်လေးတွေကို မျှော်နေတဲ့ ခြေသုတ်ခုံတွေနဲ့ သြဂုတ်ဟာ ကျည်သင့်အင်္ကျီစကို နာကျင်စွာ ချုပ်ဝတ်ခဲ့ရတယ် ဒါပေမဲ့ သြဂုတ်ဟာ ဆုပ်ထားတဲ့လက်သီးကို ဖြည်မသွားခဲ့ဘူး ကျခဲ့တဲ့သွေးကို ပြန်မသိမ်းခဲ့ဘူး လွှင့်ထားတဲ့အလံကို ပြန်မချခဲ့ဘူး လက်သီးကို လေထဲဆန့်ထုတ်ဖို့သာ တွေးခဲ့သူတွေကို လူမသိသူမသိ...
Page 1 of 35812345...358»
အေးငြိမ်း – ကျွန်ုပ် အလွန်ခေတ်နောက်ကျနေသေးသည် ဆိုခြင်းအကြောင်း https://t.co/5a1uQ0LjR9 https://t.co/slI45sEAoS about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
ညိုထက်ညို – လွမ်းတနွမ်းလျ https://t.co/sf6uNZsOqh https://t.co/xdJTRsHEg4 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
နေစိမ့် – စစ်ကြိုခေတ်အသံတိတ် ရုပ်ရှင် https://t.co/4PvvZSogMr https://t.co/kjNQ7lQY6n about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Apple and Orange https://t.co/K0hxlZWD1i https://t.co/nnS9RgWwFp about 17 hours ago ReplyRetweetFavorite
မွန်းအောင်နှင့် နှစ် ၃၀ မြောက် ၈၈၈၈ အခမ်းအနား ကနေဒါတွင် ကျင်းပ https://t.co/vvfZKaXGmH https://t.co/L2Qx8ipRTp about 18 hours ago ReplyRetweetFavorite